विज्ञापन भनेको चन्दा होइन लगानी हो भन्ने कुरा स्थापित भइसक्योः पवन अधिकारी
इटहरीः इटहरीमा मुख्य कार्यालय रहेर सञ्चालनमा आएको पाथीभरा एडभरटाइजिङ प्रालिले पाँचाँै वार्षिक उत्सव मनाएको छ । प्रालिका सञ्चालक पवन अधिकारीले पत्रकारितासँगै विज्ञापन एजेन्सीमार्फत् प्रवेश गरेको ५ वर्ष पुगेको छ । स्थानीयदेखि प्रादेशिक अनि राष्ट्रिय मिडियामा प्रदेश १ बाट सबैभन्दा धेरै विज्ञापन कारोबार गर्ने पाथीभरा एडभरटाइजिङको पाँचौं वर्षगाँठकै अवसरमा अधिकारीले नयाँ भेन्चर शुरु गरेका छन् ।
‘पाथीभरा जब लिंक’नामक रोजगारी खोज्ने र रोजगारी दिनेहरूको पुल बन्ने उद्देश्यले नयाँ भेन्चर शुरु गरेको अधिकारीले बताएका छन् । उनै अधिकारीसँग पाथीभरा एडभरटाइजिङको पाँचौँ वर्षगाँठ, नेपाली विज्ञापन बजारमा प्रदेश १, क्लिन फिड अनि जब लिंकको नयाँ भेन्चरको बारेमा गरेको कुराकानीको सारांशः
पाथीभरा एडभरटाइजिङ स्थापनाको ५ वर्षमा प्रदेश १ मा के परिवर्तन भयो ?
पाथीभरा एडभरटाइजिङ स्थापनाको ५ वर्षमा हामीले सरकारी, गैर सरकारी संस्थादेखि कर्पोरेट संस्थाहरूसँग व्यावसायिक सम्बन्ध बनाएका छौँ । र, विज्ञापन गर्नु भनेको चन्दा दिनु होइन, आफ्नो व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्नु हो भन्ने बुझाउन सफल भएका छौँ ।
स्थानीयदेखि राष्ट्रिय मिडियासम्ममा विज्ञापनको बजार छ है भन्ने छाप पार्न पनि हामी सफल भयौँ । विज्ञापन बजारको विकास र व्यवसायीकरण गर्नमा यीे ५ वर्ष महत्वपूर्ण रहे भन्ने लाग्छ ।
स्थापनाको छोटो समयमै यो एडभरटाइजिङ लिडिङ विज्ञापन एजेन्सी बन्यो । प्रदेश १ का मात्रै होइन अन्य विभिन्न स्थानबाट आएका विज्ञापन पनि पाथीभरासँगै ठोक्किएका छन् । यो सबै कसरी सम्भव भयो ?
सबैभन्दा महत्वपूर्ण आफ्नो संस्थाप्रतिको लगाव र लगानी हो । मेरो एक दशक हाराहारीको पत्रकारितायात्रामा धेरै पत्रकार, पत्रपत्रिका, मिडियादेखि समाजमा सम्बन्ध थियो । अरु पनि प्रदेश १ मा राम्रा विज्ञापन एजेन्सी छन् । तर, अलिक धेरै चिनिएको र अग्रणी भने पाथीभरा नै हो भन्ने कुरा धेरैले भनेका छन् ।
तपाईंले राजधानीबाहिर विज्ञापन एजेन्सी खोल्नुभयो । सबै मिडियाहरू राजधानी केन्द्रित हुँदा कत्तिको समस्या आएका छन् ?
केही समय अगाडि विज्ञापन एजेन्सीका केन्द्रीय पदाधिकारी विराटनगर आउँदा मैले प्रदेश १ मा विज्ञापन सङ्घमा दर्ता नभएका थुप्रै एजेन्सी छन् । दर्ता गरौँ भने । उहाँहरूले किन आफ्नै घरमा आगो लाउने ? त्यो नगरौँ भन्नुभएको थियो । राजधानीबाहिरकालाई यसरी स्थान नदिने देखिएको छ । तर, म भन्छु हरेक सक्षम पत्रकारको विज्ञापन एजेन्सी हुनुपर्छ । हामी व्यावसायिक हुनुपर्छ । सरकारलाई राजस्व तिरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
नेपाली विज्ञापन बजारका क्लिन फिडको कुरा आयो तर लागू भएको छैन । यसबारेमा के भनाइ छ तपाईंको ?
क्लिन फिडको अवधारणा हालका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले केन्द्रीय सरकारको सञ्चारमन्त्री हुँदा ल्याएको योजना हो । हालका सङ्घीय सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पनि जसरी पनि क्लिन फिड लागू गर्ने कुरा गर्नुभएको छ । तर, आजसम्म लागू भएको छैन । लागू हुनुपर्छ । यसले नेपाली विज्ञापन बजार बलियो बनाउनेछ ।
आज भारतको गुजरातको उत्पादनको विज्ञापन नेपाली बजारमा सहजै हुने तर नेपाली उत्पादनको चाहिँ नहुनुमा यही क्लिन फिड लागू नभएर हो । त्यसैले अब क्लिन फिड लागु हुनुपर्छ । यो सबैको हितमा छ ।
एडभरटाइजिङ स्थापना भएको पाँचौं वर्षमा जब लिंकको स्थापना गर्नुभएको छ । विज्ञापन बजारमा भर नभएर यस्तो विकल्प ल्याउनुभएको हो ?
त्यस्तो होइन । म विज्ञापनमा अझै विकास र विस्तार गर्ने पक्षमा छु । जब लिंकचाहिँ बजारमा आवश्यक दक्ष जनशक्तिलाई आवश्यक क्षेत्रमा लैजान ल्याएको भेन्चर हो । जागिर चाहनेहरूले आफ्नो बायोडाटा हामीलाई दिनुहुन्छ ।
हामी निःशुल्क फारम र बायोडाटा लिन्छौँ । रोजगारदातासम्म जागिर गर्न चाहने पुगेपछि हामी केही सेवा शुल्क लिन्छौँ । सरकारलाई राजस्व तिर्छाैँ । यस्तो जब लिंक हुनुअगाडि नै मैले गत वर्ष ६० जना हाराहारीलाई व्यक्तिगत रूपमा विभिन्न ठाउँमा जागिर लगाउन सहयोग गरेको थिएँ । अब भने व्यावसायिक र व्यवस्थित रूपमा पाथीभरा जब लिंकमार्फत् यो काम शुरु गर्न लागेको हो ।